ROG Strix Scar 17, laptọọpụ ịgba chaa chaa zuru oke egwuregwu [Nyochaa] | Akụkọ akụrụngwa
N’oge na-adịbeghị anya, Asus webatara ọtụtụ laptọọpụ ọhụrụ ROG (Republic nke Gamers) iji kpalie ndị na-ege ntị na-achọkarị ihe. N'ebe onyinye na ọnụahịa a gbanwere, n'oge a ROG chọrọ ịchọta ihe ndị kachasị mma na ngwaọrụ nke maka ịrụ ọrụ na ọnụahịa adịghị maka onye ọ bụla.
Echefula ihe ọ bụla n'ihi na anyị nwekwara vidiyo mara mma maka gị.
Dị ka oge niile, ihe mbụ anyị kwadoro bụ na ị ga-aga ozugbo na vidiyo nke na-eduga nyocha ederede a, n'ime ya ị ga-enwe ike ịhụ unboxing na anyị ga-egosi gị nkọwa nke ngwaahịa dị ndụ, n'ihi na ọ bụghị otu ịgụ ya karịa iji anya gị hụ ya. Te anyị na-akwado ka ị denye aha anyị Ọwa YouTube ebe ọ bụ na anyị bulite teknụzụ kachasị ọhụrụ ka ị ghara ileghara ihe ọ bụla anya.
Ọ masịrị gị? Nwere ike ịzụta ROG Strix Scar 17 na ọnụahịa kacha mma na EGO A.
1 Nzube na ọdịnaya nke igbe
3 Nzuzo na nhazi
4 Ihuenyo na multimedia ngalaba
Nzube na ọdịnaya nke igbe
Asus ROG Strix Scar 17 a bụ "mazacote", anyị nwere nnukwu ngwaahịa, ozugbo anyị wepụrụ ya na igbe anyị hụrụ. Nkwakọ ngwaahịa a na-achọsi ike ịmata ihe, mgbe anyị mepere ya, a gosipụtara anyị laptọọpụ nwere akụkụ nke X x 39,97 29,34 2,79 cm maka ngụkọta ịdị arọ nke 2,9 n'arọ, ekwuru ya n’isi nso. Mana ihe a niile na-agụtaghị ike ọkụ na mpụga, nke dịkwa otu kilogram ma ọ dị oke mkpa.
Akụkụ: X x 39,97 29,34 2,79 cm
Ibu ibu: 2,9 n'arọ
Otú ọ dị, ngwaọrụ ahụ bụ nke aluminom na-enwekarị omenala ROG. Anyị nwere obere trackpad, mana ọ nwere bọtịnụ anụ ahụ abụọ na ala. N'akụkụ aka nri anyị nwekwara keyboard, ọnụọgụ nke enwere ekele ma ọ bụrụ na anyị jikwa ya rụọ ọrụ, nke anaghị ewute ya. N'aka nke ọzọ, ndị LED nwere ọrụ dị mkpa n'akụkụ ngwaọrụ niile yana na logo na azụ. Ọdịdị na-eme ihe ike ma dị oke njọ, ebe ị ga-etinye ihe ngwaike dị oke egwu.
Anyị na-agakwuru naanị teknụzụ. Anyị na-amalite na-ekwe omume ịhọrọ n'etiti a 7th ọgbọ Intel isi iXNUMX ma ọ bụ nwanne ya nwoke tọrọ Intel isi i9. Maka akụkụ ha, nsụgharị abụọ ahụ nwere 32GB nke DDR4 RAM ruo 3200MHz kewara abụọ 16GB modul, Anyị agaghị enwe RAM ọ bụla, nke ahụ doro anya.
Maka batrị anyị na-ahụ 66Wh na ngụkọta na a kama ọdịnala na keukwu netwọk nkwụnye. A na-eburu ya n'azụ dị ka ọ dị na atụmatụ ROG. Banyere nchekwa anyị nwere SSD abụọ nke 500 GB ọ bụla na teknụzụ NVME, ma anyị nwere ọdụ ụgbọ mmiri nke atọ ma ọ bụrụ na anyị chọrọ ịbawanye ebe nchekwa ahụ karịa, anyị pụrụ ịgụnye ruo 3 SSD ụdị M2 diski.
Anyị na-atụgharị ugbu a na "ihe dị mkpa", kaadị ndịna-emeputa. Anyị na-arịgo NVIDIA GeForce RTX 2080 Super, ya mere, anyị na-aga ozugbo n’elu laptọọpụ gamer na ngwaike kachasị mma n’ahịa. Nkọwa pụrụ iche maka igodo ịmata na anyị nwere ike ịhazi ọrụ, ọrụ nke ndị LED na ọbụlagodi ịmeghe usoro ahụ.
Nzuzo na nhazi
Banyere njikọta, ihe niile fọdụrụ maka azụ, ebe ahụ anyị ga-ahụ ọdụ ụgbọ mmiri atọ USB-A 3.2, Jack 3,5 mm, ọdụ ụgbọ mmiri RJ45 iji jikọọ eriri LAN, HDMI 2.0 iji nweta ezigbo mma ma ghara ichefu, Otu DisplayPort-Dabara USB-C n'ọdụ ụgbọ mmiri nke ahụ ga-enyere anyị aka inweta onyogho na ụda site na ya. N'ezie, enwere ọtụtụ ya na ngalaba gbasara njikọta nke anụ ahụ na enweghị m ike ịme mkpesa na nke a. Maka m ọ ka dị mkpa na HDMI dị na laptọọpụ, ebe ọ dị anya ịbụ usoro anaghị adịte aka.
Zụta Asus ROG Strix 17
Maka akụkụ ya, na ọkwa ikuku anyị nwere Bluetooth 5.1 na nke kachasị, kaadị WiFi 6 nke nyere anyị nsonaazụ magburu onwe ya ma na ọkwa nbudata na ọkwa ọkwa mgbaama. Kaadị eserese nke na-adịgide ndụ na ihe ị ga-atụ anya na ngwaahịa nwere njirimara ndị a. Ihe si na ya pụta dị oke mma dịka ị pụrụ ịhụ na vidiyo ebe ọ ruru ọsọ nke nbudata 500 MB.
Ihuenyo na multimedia ngalaba
Akụkụ ọzọ ebe nke a kacha pụta ìhè ROG Strix Scar 17 bụ ihuenyo, anyị nwere otu panel nke bi na 82% nke ngụkọta ya na mkpuchi mkpuchi ntụgharị uche nke ukwuu. Ọnọdụ nchapụta na agba karịrị nke ziri ezi na usoro ọkọlọtọ ya, anyị nwere ike ịhazi ya na ngwaọrụ ROG's Aura. Maka akụkụ ya anyị nwere mkpebi FullHD (1920 x 1080) na ihe kacha mkpa, a ume ndu nke 300 Hz na oge nzaghachi nke 3ms. Ihe si na ya pụta bụ ihe pụrụ iche.
Maka akụkụ gị na ụda abụọ ọkà okwu 4,2 watt hapụrụ Site na ampilifaya nwere ọgụgụ isi, nsonaazụ a ka mma bass, ụda dị mma ma achọtabeghị m ịgwagbu ya na nnukwu mpịakọta, ee, m ga-ekwu na ike ikpeazụ anaghị adịkarị ọpụrụiche
Asus ROG Strix Akara 17 awade obi jụrụ site mmiri mmiri ọla na otu ihe omuma nke na-adighi eru 50 dB nke na-ekpochapu oku nke akuku. Nnwere onwe dị na mgbada, ihe karịrị awa atọ na-achọ egwuregwu vidio, anyị ga-eji ya rụọ ọrụ.
Anyị etinyela ROG Strix Scar 17 iji nwalee obodo Skylines, CoD War War ma ọ bụ Dirt 2.0 ma ayi ahughi ihe ọ bula n resguzogide ya. O doro anya na ha anaghị achọkarị egwuregwu vidio, mana ngwaike nke ngwaọrụ a anaghị akpọ anyị ka anyị chọọ ịma ya aka, n'ihi na anyị ga-akụ mgbidi ahụ ugboro ugboro.
Anyị nwere ngwaọrụ dị oke njọ, ee, mana ọ na-elekwasị anya n'inye obere nnwere onwe nye ndị egwuregwu kacha achọ. Ọ dị elu karịa ọkwa Asus ROG nke Strix X na maka ọnụahịa na-eme ka anyị chee. Agbanyeghị, ikike nke akụrụngwa ya ga - eme ya ọfụma ọfụma ma ọ bụrụ na anyị nwere nhọrọ iji ya dịka ebe ọrụ. Nwere ike ịzụta ya site na 2.300 XNUMX na Amazon (Njikọ) ma ọ bụ naanị gị Ibe weebụ.
ROG Strix Akara 17
Unmatched raw ike na oru ike
A imewe na customization nke ọma ike n'ime usoro
Enweghi nkọwa nke njikọta na-efu
"Portability" bụ na ndabere
Fans na-eme mkpọtụ oge ụfọdụ
Onyinye ike bu ezigbo hulk
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » ROG Strix Scar 17, laptọọpụ egwuregwu na-adịchaghị egwu [Analysis]
USBdị USB: ohere na atụmatụ niile